Ku soo dhawow Xaronta Cafimaadka ee Horfield - Horfield
Ku soo dhawow Xaronta Cafimaadka ee Horfield
Waxaano soo dhawaynaynaa xanoonsanayaal cosob oo ku nool agagaarka xaronta.
Fadlan daabaco dabadeed booxi warqadda isdiiwaangalinta (halkan laga helayo).
Fadlan waliba daabaco oo booxi warqadda su’aalaadka macloomaadka xanoonsanaha (helkan lagahelayo).
Waxaad keentaa waraaqahaaga aqoonsiga sida leesanka wadidda gawaadhida, Jawaaska amaba kadhka aqoonsiga.
Waxaa kalood o baahantahay waraaq cadaynaysa cinwaankaga sida waraaqda lago bixiyo gaasta, leydhka, telefonka amaba cashoorta koonsolka amaba warqadda heshiis kirayn gori.
Haddi ingriisido ahayna loqaddaada kowaad aheen, woo adkaanaya la kolankaaga dhakhtarko.
Si aanno koo caawinno waxaano leenahay adeeg turjumaaneed kaasoo lago helaayo telefoon intaad ballantada ku jirtid.
Markaad ballan samaysanayso fadlan o sheeg shaqaalahayaga qaabilaadka inaad o baahantahay adeega turjumaadda.
Waxaano bixinna adeegyo badan oo ah GP, Neres, Kalkaaliyaal cafimaad, shaqaale fermasi iyo bixiyaal adeega dagdaga ah.
Si aad o samaysato ballan waxaad kari karta inaad:
. ‘Online’ inaad ku samaysato adigo isticmaalaya Adeega ‘Patient Access’ (Kaasoo waliba ku saamaxaaya inaad dalbata warqadda dkakhtarka ee dawooyinka lago qaato iyo inaad gashid ‘Online’ macloomaad kaga caafimaad).
Hadii aad ka diiwaan gashantahay adeega ‘Patient Access’ waxaad istcmaali karta ‘User ID’ gaga iyo ‘Password’kaga. Hadii aannad diwaangashaneen fadlan halkan riix si aad o aragto sidaad o geli laheed.
. Nago soo siyaaro xaranta.
. Nagala soo hadal nambarkan 0117 969 5391 dabadeedna raac tilmaamaha. (Wax kale oo ku siin kara khad atomatika ood ballamaha ku samaysankarto waqtiyadda xaronto xidhantahay).
Marka aad nala soo xidhiidho adigo ballan donayaa, waxaano doonaynaa inanno ko tosno qofka ogo haboon. Si aanno ta o helno waxaano kaaga baahanahay inaad macloomaad naga siiso sabaabta aad nola so xidhiidhay. Xog ilaalintona way ko waajibantahay qof wal oo shaqaalahayaga ah, sidaa derteed wax wal ood no sheegta waa hafidanyahay.
Dalabka ballamoho aad boo o sarayaa oo badanyahay. Markaa haddii aanad imankareen qofkale ayaa imankaraya. Markaa fadlan si dhaqsa ah noogo soo sheeg haddaanad o baahneen balantaadii.
(Waliba waa la sameenkaraa taa adigo isticmaalaya adeega ‘Patient Access’ amaba telefonka la atomaati garayay.)
Sidaadan nagola soo xidhid
QORAAL/SIYAARO Horfield Health Centre
TELEFON 0117 969 5391